ဘက်ထရီအားသွင်းမှုအတွက် UGREEN မှအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည် Gadget သတင်း
ဘက်ထရီအားသွင်းမှုအတွက် UGREEN မှအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
ကျနော်တို့လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက် ဘက်ထရီအားသွင်းနှင့်ဆက်စပ်သော gadget များ မေ့ပျောက်ခြင်းများစွာအတွက်။ စမတ်ဖုန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်ဘက်ထရီများသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မေ့ပျောက်သွားပုံရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ၏လက်မှယနေ့ UGREENငါတို့ယူလာပြီ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများသည်အမြဲဖွင့်ထားနိုင်ရန်ရွေးချယ်စရာများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ဘက်ထရီများသည်အမြဲတမ်းတက်ကြွစေရန်အတွက်ပစ္စည်းများကိုပေးသော UGREEN ကဲ့သို့ထုတ်လုပ်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Charger များကမ်းလှမ်းသည် အများကြီးပိုထိရောက်နှင့်လျော့နည်းအချိန်အတွက်ဝန်။ အို တကယ်ကိုသေးငယ်ပြီးအားကောင်းသောပြင်ပဘက်ထရီများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့နေ့စဉ်အသုံး ၀ င်တဲ့ဘဝကိုအကြိမ်များစွာများပြားစေတယ်။
1 UGREEN၊ သင်၏စမတ်ဖုန်းအတွက်အဖော်
2 UGREEN ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ရန်
3 18W USB C charger ကို
4 30W USB C charger ကို
ဒီအခါသမယမှာငါတို့သက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်၊ ၎င်း၏လက်ရှိထုတ်ကုန်သုံးခု။ နှစ် charger များ နှင့် အလွန်မြန်သောအားသွင်းခြင်း နှင့်အနည်းငယ်ပေမယ့် "အနိုင်ကျင့်" ပြင်ပဘက်ထရီအရာခပ်သိမ်းကိုအောက်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။ ဆက်ဆက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဘက်ထရီကိုသူတို့တတ်နိုင်သမျှထက်ကျော်လွန်သုံးစွဲသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများတွင်ဘက်ထရီကုန်သွားစေရန်အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ပါ။ တစ်ခုရှိသည် ငါတို့အရင်ကထက်မြန်မြန်အားသွင်းသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားရန်အခွင့်အရေးမရမချင်းတန်ဖိုးမထားသည့်ကြိုတင်ငွေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်စွမ်းသေးငယ်တဲ့ gadget ကိုပတ်ပတ်လည်သယ်ဆောင် မည်သည့်စမတ်ဖုန်းကိုမဆိုအားသွင်းခြင်း (၃) ခုထက်မကသော ဒါ့အပြင်စူပါစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ UGREEN ဆက်စပ်ပစ္စည်းသုံးခုအပြင်ဒီထုတ်လုပ်သူများရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းအများစုဟာဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။ ကန ဦး ရှိထုတ်ကုန်များ အလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများ။ ပြီးတော့သူတို့မှာရှိတယ် အသုံးပြုသူများအကြားကောင်းသောဂုဏ်သတင်း အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုစတိုးဆိုင်များမှတဆင့်။
ဥပမာအားဖြင့် Amazon မှအကြံပြုထားသည့် UGREEN ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုမည်သည့်အိမ်နှင့်ရုံးတွင်မဆိုတွေ့ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသည်သိ အသိအမှတ်ပြုဂုဏ်သိက္ခာ၏ထုတ်ကုန် သတင်းကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ထိုမြှင့်တင်ရေးနှင့်လျှော့စျေးကုဒ်များ၏ကျေးဇူးကြောင့်၎င်းကိုသင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင့်အတွက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Charger ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးတာပါပဲ မသက်သက်လိုအပ်ချက်ထဲကလျှင်။ စက်ရုံအားသွင်းစက်ကိုရေတွက်ခြင်း၊ မကြာသေးမီအချိန်အထိထုတ်လုပ်သူအားလုံးပါ ၀ င်သောကြောင့်အခြား ၀ ယ်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။ အခြေအနေများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယအားသွင်းစနစ်မလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းသည်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်အမှန်တရားမှာလျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။
18W USB C charger ကို
ထုတ်ကုန်များ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြောင်းပါ Power Delivery 3.0 နည်းပညာဖြင့်အလွန်မြန်သောအားသွင်းနိုင်သည့်အားသွင်းစက်။ အဲဒါရှိတယ် 18W မြန်နှုန်းမြန်သည် ကြောင်းတစ်ဝန်ကတိပေး စမတ်ဖုန်းအားလုံးနီးပါး၏ဘက်ထရီ၏ ၅၀% သည်မိနစ် ၃၀ အတွင်း။ တစ် ဦး နှင့်အတူတစ် ဦး ဝန် Classic charger ထက် ၅၀% ပိုမြန်သည် သမားရိုးကျ။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားသွင်းကိရိယာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် USB Type-C သွင်းအားသွင်း။ USB အဆုံးရှိသောသမားရိုးကျ cable ကိုကျွန်ုပ်တို့ သုံး၍ မရပါ။ ၎င်းသည် USB C မှ USB C သို့မဟုတ်ကြိုးဖြင့် C ကြိုးများအတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်လည်းမှန်ကန်သည် လက်ရှိထုတ်ကုန်အများစုသည်ဤဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်.
အပေါ်ရေတွက် UGREEN charger သည်လုံခြုံမှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ၎င်းတွင်စနစ်တစ်ခုရှိသည် ၎င်းကိရိယာသည်အပြည့်အဝအားသွင်းထားကြောင်းတွေ့ရှိသောအခါ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပြတ်တောက်သွားသည်။ ရှိသည် Overload ကာကွယ်မှု နှင့်အပူ။ ဒါဟာအစတပ်ဆင်ထားသည် IC ချစ်ပ် အဘယ်အရာကိုစနစ်စေသည် အကောင်းဆုံးအားသွင်းနိုင်သည့်အပူချိန်ကိုရရှိရန်အတွက်အပူအားကိုလျှော့ချသည်.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Charger တစ်ခုသည်သိပ္ပံသိပ်မများလှဘဲ၎င်း၏ပုံသဏ္moreာန်သည်ထူထပ်စွာသို့မဟုတ်သိပ်သည်းမှုမရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ်၎င်း၏ရပ်တန့်ခြင်းအရောင်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်ဆိုင်နေရသည် အများဆုံး "ပုံမှန်" ၏ chargers ကို သူတို့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သူတို့သည်တောက်ပသောအဖြူရောင်ပြီးအောင်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ဝယ်ပါ 18W USB C charger ကို အမေဇုံအပေါ်လျှော့
30W USB C charger ကို
ထုတ်ကုန်များ၏ဒုတိယအခြား charger ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်တူညီပြီးအနည်းငယ်ပိုထူသည်။ ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုအစွမ်းထက်ကြောင့်ကတည်းက အလွန်မြန်သောအားသွင်းခြင်း၊ ပါဝါပို့ခြင်း ၃.၀ဒါပေမယ့် 30W ပါဝါ။ ၂ နာရီမပြည့်မီနောက်မျိုးဆက်သစ်အိုင်ပက်ကိုအပြည့်အ ၀ အားသွင်းနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဒီ 30W charger ကိုရှိပါတယ် USB က C input ကိုနှင့် output ကို connector ကို။ ဒါကြောင့်ဒီ input type နဲ့အတူ cable တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပြုထားသလိုပါပဲ၊ Micro USB စျေးကွက်ထဲရောက်နေတာနှစ်အတော်ကြာခဲ့လို့ဒီဟာကအသုံးအများဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲသူကအများဆုံး universal connector ကိုဖြစ်လိမ့်မည်.
UGREEN charger များလိုပဲ IC Chip တပ်ဆင်ထားသည် ဒါကြောင့်အလွန်အကျွံအပူမခံစားရပါဘူး။ အားအပြည့်သွင်းပြီးသည့်အခါ၎င်းစက်သည်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားသောကြောင့်တစ်ညလုံးချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
Amazon မှာဝယ်ပါ 30W USB C charger ကို လျှော့စျေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်အတူ
UGREEN ထုတ်ကုန်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပြီးရယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ က အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီ ဒါဟာရှည်လျားသောကြောင့်အသုံးဝင်သောအဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတစ်ခုဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ခရီးစဉ်ကိုသွားသို့မဟုတ်သဘာဝမှတနင်္ဂနွေအဘို့အထွက်သွားသည့်အခါအဘို့မသာ။ ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက ပို။ ပို။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနဲ့သူတို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနေ့စဉ်နေ့တိုင်း ၀ တ်ဆင်တာဟာအရူးမဟုတ်ပါဘူး။
UGREEN အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးဆောင်ကိရိယာများအတွက်ခရီးဆောင်ကိရိယာတစ်ခု ငါတို့မှာရှိတယ် ၁၀,၀၀၀ mAh အထိရရှိနိုင်သောအပိုဝန်ဆောင်ခ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ Quick Charge ဖြင့် USB 3.0 connector တစ်နာရီအတွင်းစမတ်ဖုန်းကိုအပြည့်အဝအားသွင်းရန်။
ကြီးမားသောဘက်ထရီအားသွင်းမှုကိုအလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော gadget တွင်ရနိုင်သည်။ လက်သည်း သာ 10.5 x ကို 5.5 x ကို 2.4 စင်တီမီတာတိုင်းတာသည်တယ်လီဖုန်းထက်အများကြီးသေးငယ်တယ်။ ပြီးတော့ ပီဆို စူပါအလင်းလည်း ၁၈၁ ဂရမ်s.
ငါတို့ရှာတယ် output ports နှစ်ခု၊ သမားရိုးကျ USB နှင့် USB Type-C, အဆုံးစွန်သောလည်းဘက်ထရီအားသွင်းရန် input ကိုဆိပ်ကမ်းကို။ UGREEN PowerDot သည်မည်သည့်ကိရိယာအတွက်မဆိုအလျင်အမြန်အားသွင်းပေးနိုင်သည် 18W ပါဝါ။ ဒါ့အပြင် USB C. ကနေလည်းအားသွင်းလို့ရတယ်။
ဘေးထွက်ခလုတ်နှင့်အတူ ကျနော်တို့ရရှိနိုင်ဝန်စွမ်းရည်ကိုသိနိုင်သည် ငါတို့မှာဘာရှိလဲ အသေးစား LED မီးလုံးလေးကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်သည့်အခါမည်သည့်ဘက်ထရီမည်မျှကျန်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိလိမ့်မည်။ ၁%၊ ၆% မှ ၂၅% အကြား၊ LED ၂ ခု၊ ၂၆% မှ ၅၀% အကြား၊ LED ၃ ခု၊ ၅၁ မှ ၇၅% အကြား LED များ ၄ ခုနှင့် ၇၆% မှ ၁၀၀% ကြားရှိ LEDs ၄ ခု။
အကယ်လို့သင်ဟာစွမ်းအင်သုံးပြင်ပဘက်ထရီသေးသေးလေးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်၊ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ UGREEN အားဖြင့်။ အထူးလျှော့စျေးရရှိရန်အတွက်“ NYWKL2EH” ပရိုမိုကုဒ်ကိုအသုံးပြုရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » ဘက်ထရီအားသွင်းမှုအတွက် UGREEN မှအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
ဒင်္ဂါးပြားမာစတာ - ဒီလှည့်ကွက်တွေနဲ့အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုကိုရယူပါ
Huawei Watch GT2 Pro - ယနေ့အထိအပြည့်စုံဆုံးနာရီ